35 YouTube hacks iyo Tricks in ay ka qiimo Your Isku day
YouTube, ugu weyn video qaybsiga goobta ku Web iyo sidoo kale ka search engine labaad ee ugu weyn, wax walba waa in ay bixiyaan in ka badan aad ka filan karto. Inkasta oo aad ku jirtay lover YouTube ah waqti dheer ah tan iyo markaas, waxaa weli jira hacks iyo tabaha in aanad garanayn quruxsan badan YouTube. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah ay tahay in aanad ka maqnaan. Iyaga Fiiri hoos ku qoran.
Eeg waxa hacks YouTube iyo tabaha aad u baahan tahay si degdeg ah
Hacks URL YouTube iyo tabaha
YouTube daawashada hacks iyo tabaha
Tilmaamo Gaar ah YouTube
Baadhi YouTube iyo tabaha degsado
Ukunta YouTube Easter
YouTube markii bilowgii gaar ah
Marka aad rabto in aad saaxiibadaa si ay u arkaan qayb ka mid ah qaar ka mid ah video ah, waxaad u baahan kartaa inuu u sheego markii ugu bilaabatay saxda ah. Maxaad dhibaato in ay waxan u samaynaysaan? Halkan waa Dhagar aad u isticmaali karto si aad ula wadaagto saaxiibadaa aad ka wakhtiga saxda in aad rabto in aad saaxiibadaa si ay u arkaan.
Halkan waa URL YouTube ah:
Ku dar = # t 02m08s dhammaadka url iyo wadaagto asxaabtaada. Taasi waxay ka dhigan tahay in aad saaxiib u fiirin doonaa video laga soo 2 daqiiqo iyo 8 ilbiriqsi. Waxaad ka bedeli kartaa waqtiga ilaa iyo inta ay tahay aan ka badnayn video laftiisa. Waxa kale oo aad xiri kara URL ah si ay u bilaabaan ka eegayay, wakhtiga saxda.
Qeybtaan ka gudub aan la rabin
Waxaa had iyo jeer lagu caajiso in ay sugaan si aad u hesho macluumaadka dhabta ah ee video ah. Ha welwelin. Halkan waa Dhagar inay u boodboodaan qayb ka mid aan waxtar lahayn oo taga si 30% ka mid ah video si toos ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay dar " & wadsworth = 1 "in dhamaadka URL video ah. Markaas nuqul ka url iyo waxa ay haatan isku day in aad browser.
https://www.youtube.com/watch?v=9y73P4QVgl4 & wadsworth = 1
Tallaabsato xadaynta gobolka
Waa war ku jirin in YouTube laga xannibo ee dalalka qaar. YouTube ogaadaa Ciwaanka IP: ga si aad u ogaado haddii si uu idiin tuso content video ah. Ma jiraa hab kasta oo la dhaafayo xadaynta this? Haa, oo keliya in aad u baahan tahay si ay u sameeyaan isbedel yar URL si ay arrintaas. Just leeyihiin isku day ah!
https://www.youtube.com / daawado? v = 9y73P4QVgl4
https://www.youtube.com / v / 9y73P4QVgl4
Ku celi loo maqli karo YouTube
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad mar kale iyo mar kale si uu u daawado video YouTube ah, laakiin YouTube aadan lahayn sida ka muuqatay. Maxaa ka dibna la sameeyo? Ku dar wax ay URL YouTube iyo aad jiraan. Ee sug videos sida marar badan sida aad rabto.
https: //www.you tube ? .com / daawado v = 9y73P4QVgl4
https: //www.you ku celinayaa .com / daawado v = 9y73P4QVgl4 iyo saxaafadda galaan?.
View videos tayo sare leh
Up ilaa hadda, videos iyo aad u badan ay u taageeraan loo maqli karo oo tayo sare leh. Waxaad ku dari kartaa " & FMT = 18 "(rikoodh, 480 x 270 xallinta) ama" & FMT = 22 "(rikoodh, 1280 x 720 xallinta) ilaa dhammaadka URL ah. Haddii video ay taageertaa xal sida, aad ku raaxaysan kartaa video tayo sare leh oo hadda.
Videos Embed Sare Quality
Haddii aad rabto in aad tayo sare leh gundhig videos, waxaad u baahan tahay in aad ku darto " & ap =% 2526fmt% 3D18 "ama" & ap =% 2526fmt% 3D22 "in dhamaadka URL la socosho ah sida soo socota.
<Iframe width = "420" height = "315" SRC = "// www.youtube.com/embed/w4tPd9DTXOs" frameborder = "0" allowfullscreen> </ iframe>
<Iframe width = "420" height = "315" SRC = "// www.youtube.com/embed/w4tPd9DTXOs & ap =% 2526fmt% 3D18 "frameborder =" 0 "allowfullscreen> </ iframe>
Laab video ah gundhig
Si aad ku celis ah ka dib markii la dhammeeyayna ay gundhig videos, waxaad u baahan doontaa inaad append " & loop = 1 "in dhamaadka URL la socosho ah.
<Iframe width = "420" height = "315" SRC = "// www.youtube.com/embed/w4tPd9DTXOs & loop = 1 "frameborder =" 0 "allowfullscreen> </ iframe>
Autoplay Video Your laka
Mararka qaarkood, waxaa doono dhibsado in autoplays video by laftiisa. Laakiin Haddii waa inaad, waxaad ku dari kartaa " & autoplay = 1 "in dhamaadka URL la socosho ah.
<Iframe width = "420" height = "315" SRC = "// www.youtube.com/embed/w4tPd9DTXOs & autoplay = 1 "frameborder =" 0 "allowfullscreen> </ iframe>
Disable Related Videos Iyada oo la adkaynayo
Ha u baahan tahay ee la xiriira videos aad video gundhig? Taasi waa sahlan tahay in la gaaro. Just daro " rel = 0? "dhammaadka URL la socosho ah.
<Iframe width = "420" height = "315" SRC = "// www.youtube.com/embed/w4tPd9DTXOs ? rel = 0 "frameborder =" 0 "allowfullscreen> </ iframe>
Default Calan tayada video loo maqli karo
Looma baahna in mar dambe la beddelo tayada for video kasta. Mid ka mid ah goob ay xaqiijin doonaan in video tayo sare leh ee waqtiga oo dhan. Tag meel loo maqli karo YouTube dooro " Had iyo jeer dooran ugu fiican oo tayo leh ee la xidhiidha iyo ciyaaryahan aan size "iyo sax checkbox ee" Had iyo jeer ciyaari HD on fullscreen (marka la heli karo) ". Waxa kale oo aad ka beddeli karaan goobaha ay u qoritaan iyo qoraalka.
Pre-load dhan YouTube videos
YouTube videos waxay ku saleysan yihiin DASH ee (Mishiinkan Adaptive Streaming badan HTTP) technology, sidaa daraadeed waxa kaliya ee ugu rarataan culaysyo ilbiriqsi yar ka hor halkaas oo aad ka daawanayay. Ma jiraa hab kasta oo ka hor-shuban oo dhan YouTube videos aadan si ay u baahan tahay in aad sugto? Haa, taasi waa suurto gal. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in loo maqli karo gab DASH la goobaha qaar ka mid ah. Halkan waa faahfaahinta.
YouTube baal Beta
Waxaad jeclaan doonaa habkaani marka aad ku leedahay xiriir internet gaabis ah. Ka dib marka aad ku biiri YouTube baal Beta, waxaa jiri doona faragelinta sida ugu macquulsan ee aad video loo maqli karo. Just leeyihiin isku day ah.
Daawo YouTube galeeysid Firefox ah
Haddii aad dareento sida dhirta halka daawashada YouTube videos, waxaad isticmaali kartaa khiyaamadaas. Ku rakib tani kordhin Firefox , ka dibna aad sameyn kartid wax ka badan markiiba.
Hakinta Automatical u YouTube video
Haddii aad tabs badan oo ka mid ah YouTube video furay, Galaydh xaqiijinayo in aadan ka maqnaan doona qayb ka mid ah video.Install hal tani kordhin on your Firefox iyo marka aad u tagto tab kale, video si toos ah hakan doonaan.
Play YouTube dhaqaaq tartiib ah
YouTube aad u saamaxaaya in ay daawato videos dhaqaaq tartiib degdeg ah 0,25 iyo 0,5.
Doonayaa inaan daawado laba YouTube videos in mid ka mid screen? YouTube Doubler halkan si ay u caawiyaan waa. Ku dar laba URLs YouTube in website-ka iyo bilaabaan in ay ku raaxaystaan. Waxa kale oo aad samayn kartaa video mashup haddii aad rabto.
Haddii aad la dhibtoonayo heli music cusub, waxaad siin kartaa YouTube Diskoo go a. Inta aad ku qor magaca artist ama song magac, waxaad ka heli doontaa playlist ah music ka artist ama heeso la mid ah. Playlist music A waa hal click iska.
Dad badan ayaa ka bedel doonaa videos ay ka hor koombiyuutarka iyo waxaad isticmaali kartaa YouTube Editor si ay u gutaan in. YouTube Editor waa editor internetka la saamaynta fudud, kaas oo noqon doona ku filan tafatirka aasaasiga ah.
Weligaa ka walwal qabto dhibaato copyright la music aad isticmaasho in aad video? No worries oo dhan. YouTube Library Audio aad siisaa boqolaal free music download in.
Haddii aad weligaa yaabay waxa kulul on YouTube hadda, waxaad u tegi kartaa YouTube Isbeddellada inaan fiirino.
YouTube Movies / muujinaya TV
Haddii aadan ka hor ogahay, waxaan halkan u taaganahay in aan kuu sheego in YouTube leeyihiin meel gaar ah u filimada iyo bandhigyada TV . Riix Link inaan fiirino.
YouTube Safety Mode u saamaxaaya in ay shaandhayso waxyaalaha aan habboonayn ee YouTube iyo ku siin xaalad nadiif ah. Hoos ugu hooseysa ka dibna noqon Mode Ammaanka ee gudaha ama dibadda.
YouTube TestTube waa meesha aad tijaabin kartaa qaar ka mid ah qaababka cusub ee YouTube iyo dhiiban karto fikirkaaga si loo wanaajiyo shaqooyinka.
Sida magacaba ka muuqata, YouTube aad u saamaxaaya in ay badbaadin videos for loo maqli karo ka dib. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in guji icon saacad ku yaal dhinaca midig hoose ee video ah.
Baadhi keyword sax ah
Waxaa jira videos badan oo ku saabsan YouTube, sida aad ka heli kartaa kuwa aad rabto in aad si deg deg ah? Halkan waa Dhagar yar baadhi keyword sax ah: allintitle: (keyword). Sidaas, keyword aad ka raadin muuqan doona horyaalka video kasta oo ay noqon doontaa sida waxa aad rabto.
Raadi YouTube videos taariikhda Upload / waqtiga / Nooca / dadka kale
YouTube ayaa filter si uu kaaga caawiyo natiijada show raadinta sida ay taariikhda Upload, muddada, nooca natiijada iyo kuwa kale. Waxa aan ku jeclahay ugu Doorashada channel iyo playlist. Waxaad sidoo kale yeelan karaan isku day ah.
Inkastoo YouTube ma ogola video dajinta, waxaa jira xidhmo qalab in suuqa uu ka samaysan yahay YouTube video fud duuban. Qalabka waxaa ka mid ah Keepvid (adeeg online), AllMyTube (barnaamijka desktop), Video DownloadHelper (Firefox kordhin).
Waraaqda audio ka YouTube videos
Halkan waa adeeg online weyn oo u yeela audio ka YouTube videos in habka ugu fudud. YouTube-mp3.org kuu ogolaanayaa inaad paste URL in ay sanduuqa tixda iyo guji Beddelaan Video . Ka dib mararka qaar marka ay diinta ka weyn tahay, aad file MP3 ah si aad u computer kala soo bixi kartaa.
Play video ah on YouTube iyo nooca 1980 si toos ah, ka dibna ciyaarta missle ah ka muuqan doontaa. Hadda, waxaad tahay askari si screen video ka waxyeello ilaaliyo by missles ah.
Saliibiyiinta "Fibonacci" on YouTube oo aad ku arki doontaa idinka soo hor jeedda. Ama riix this link inay arkaan.
Isticmaal, Force ee Luke
Raadi "Isticmaal Force, Luke", waxaad arki doontaa wax walba oo ku saabsan YouTube yihiin gariir ka yeellay ama ka bidix ilaa midig. Riix this link in aad iska baarto.
Igu Ray, Scotty
Raadi "igu Ray, Scotty" on YouTube oo aad ka arki doonaa natiijada ka soo muuqday effection animation Star in aaannu ah.
Ma Rux Harlem ee
Ku qor "gariirayaa Harlem ah" galeen searchbox ee YouTube iyo YouTube samayn doonaa qoob ka eegmo Harlem aad u.
Ka daabaco YouTube videos
Haddii aad ka daabacan karto video YouTube ah, waxay noqon lahayd isku day ah? Tutorial faahfaahsan waa halkan oo aad iska baarto haddii aad xiisaynayso.
Haddii aad dhibaato la xulashada videos aad rabto, waxaad heli kartaa ratings YouTube si ay kuu caawiyaan. Ku rakib tani kordhin Chrome ka dibna waxaad arki doontaa jecelyahay iyo wuxuu necebyahay oo dhan videos. Hadda, kuwa kalena ha kala dooran videos aad u.
> Resource > YouTube > 35 YouTube hacks iyo Tricks in in aanad Miss